Ifulethi elunxwemeni (ejongene nolwandle).
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMaribel
Indlu enembono entle yolwandle ibekwe eBellavista Beach kwaye inokhuseleko lweeyure ezingama-24. Ecaleni kwesakhiwo uya kufumana i-waterfront, kunye nomzila wokujikeleza, i-Pub kunye necandelo le-restobar, iindawo zokutyela kunye nokutya okuqhelekileyo, i-Bentoteca kunye ne-market market kunye ne-seafood ehamba phambili kwindawo. Ukongeza kwezinye iindawo ezikhangayo zabakhenkethi (iPunta de Parra, iDichato, iCocholhue, iColiumo, iPingral, iMerquiche, iPudá) kunye nefektri yaseBellavista yabhengeza iSikhumbuzo seMbali yeSizwe.
Kunye nabo bonke ubuhle bendalo kunye nembonakalo yomhlaba onokuyifumana eTomé, ndifuna ukuba ukuhlala kwakho "kwiApartment on the Beach" kube ntofontofo, ngenxa yesi sizathu ndenza konke okusemandleni am ukukunika eyona ngqalelo ilungileyo, ukukhathalela iinkcukacha ezincinane eziya kwenza ukuhlala bakho amava ekhumbulekayo.
Kufuphi nommelwane uya kufumana iindlela zesekethe zabakhenkethi. Le ndlela ibandakanya iisekethe zabakhenkethi zaseDichato, Coliumo Bay, kunye neHistoric-Coastal Tomé. Kwezi ndawo, umtsalane wonxweme udibana nendawo yasemaphandleni, yonwabele i-marine egqwesileyo kunye neCreole gastronomy, ngaxeshanye ukonwabela iilwandle ezintle. Ungawonwabela imbonakalo yedolophu eselunxwemeni, kunye neziseko zophuhliso ezisuka kwindawo yakudala yoshishino lwamalaphu, iilwandle ezahlukeneyo ezinesanti ecacileyo kunye namanzi abandayo; Ungandwendwela iimbono ezithile apho unokubona unxweme kunye nezakhiwo zekomkhulu loluntu, kunye nesibonelelo esityebileyo se-gastronomic yeentlanzi kunye ne-shellfish kule ndawo. Ehlotyeni (uDisemba, uJanuwari noFebruwari) kubanjwa amatheko awahlukahlukeneyo okuzonwabisa nokuzonwabisa.
Kufutshane nendawo yokuhlala kukho iivenkile ezinkulu ezininzi, iimarike kunye nezikhululo zokugalela amafutha.
Ndiya kufumaneka iiyure ezingama-24 ngosuku ukuphendula nayiphi na imibuzo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tome